Afaka mamorona ny korontana any Eropa izay hanangana ny fanjakana Ottoman ve i Boris Johnson (razamben'i Ottoman)? : Martin Vrijland
Nihevitra aho fa vazivazy izany rehefa namaky izao valiny izao ny mpamaky iray: "Turkianina izy". Gaga be aho fa nisy Wikipedia iray nanaraka izay nanaporofo fa tena manana razamben'i Ottoman tokoa i Boris Johnson. Tsy razamben'ny Ottoman fotsiny; azontsika lazaina mazava ny razana manana asa politika. Avy i Johnson dia avy amin'ny lalan-drà mitovy amin'ny mpanao politika Ottoman Ali Kemal. Ny fahitana mahaliana, satria manohana ny faminaniako ny fanjakana Ottoman efa ho sitrana tsy ho ela. Avelao aho hanazava bebe kokoa momba izany.
Ny Fanjakana Ottoman dia lehibe indrindra teto an-tany ary nahita ny faharavany tsy ampy zato taona lasa izay. Nandritra ny taona maro aho dia nanandrana naneho tamin'ny tranokala fa ny mpanao politika dia vonona avokoa amin'ny asa ataony ary manompo ny fandaharan'asa fanatontoloana aristokratika. Tsy mahagaga àry raha mahita fianakavian'ny elita Ottoman iray miomana amin'ny korontana any Eropa izao isika izao (amin'ny alàlan'ny ny fifandonana Brexit) izay hahitana ny Fanjakana Ottoman. Efa nanombatombana ny fiverenan'ny Empira Ottoman efa ho dimy taona teo ho eo aho, ary raha ny hevitro manokana dia ilay lohahevitra tsy raharahiany indrindra ao amin'ilay vondron'olona antsoina hoe fahamarinana.
Lisitra kely ny Bokin'i Môrmôna Pejy Wikipedia avy amin'i Ali Kemal:
Ali Kemal Bey (Tiorka Ottoman: عَلِي كمال‌ بك; 1867 - 6 Novambra 1922) dia Ottoman- mpanao gazety Tiorka, mpanatontosa gazety, poeta ary mpanao politika an'ny sonia liberaly, izay minisitry ny atitany nandritra ny telo volana teo ho eo tamin'ny governemantan'i Damat Ferid Pasha, ilay Grand Vizier amin'ny Fanjakana Ottoman. Novonoina izy nandritra ny Ady Tiorka momba ny Fahaleovantena.
Kemal dia rain'i Zeki Kuneralp, izay masoivoho Tiorka taloha tany Soisa, United Kingdom, ary Espaina. Ankoatr'izay, izy dia raiben'ny ray aman-dreny avy amin'ny diplaoma Tiorka Selim Kuneralp, ary mpanao politika anglisy Stanley Johnson. Amin'ny alàlan'i Stanley Johnson, i Ali Kemal dia raiben'ny Praiminisitra Britanika Boris Johnson, ary koa i Jo Johnson (MP ho an'ny Orpington), ilay mpanao gazety Rachel Johnson, ary ilay mpandraharaha, Leo Johnson.
Amin'ity anarana tiorka Ottoman ity, Ali Kemal dia nomena ny anarana, ary tsy misy anarana manambady.
Mbola tiako ny manasongadina izany fanamarihana farany izany. Fantatray fa ny aristocrats dia tsy misalasala manova ny anarany ary ity vondrona elitistana ity dia miafina amin'ireo mpanao politika mahazatra (jereo ohatra ity lahatsoratra ity). Araka izany, ny United Kingdom dia fehezin'ny ra aristokratika Alemanina (toa an'i Holandy ihany). Ilay trano Saxonia-Coburg sy Gotha (Saxony-Coburg-Gotha) tany am-boalohany dia dinastika Alemanina izay nifehy ny firenena eropeana maro samihafa. Ny tarana-mpanjaka dia avy amin'ny trano mavo an'ny Saxony-Coburg-Saalfeld (avy amin'ny tranon'i Wettin), izay nahazo ny paozy avo roa heny tao Saxony-Coburg sy Gotha ao amin'ny 1826. Tamin'ny taonjato XNUM-X dia teraka avy amin'ny firenena maro hafa ny taranany. Tao 19, King George V dia nanova ny anaran'ny fianakavian'ny mpanjaka britanika ho Windsor. Ny haino aman-jery fampielezankevitra sy ny mpitantana azy ireo no miantoka fa hadinontsika haingana izany rehetra izany, mba tsy hahatsapan'ny olona fa fatratra ny demokrasia ary mbola ny fanjakan'ny aristokratika taloha. Izy ireo no mpiambina ny sora-tanana master.
Ny fitsipiky ny Brexit dia ampahany amin'ny script master; ny script izay aseho amin'ny zavatra hafa ao amin'ny faminaniana ara-pivavahana. Miaraka amin'ny fanambarana Balfour ao amin'ny 1917 sy ny famotehana ny Ottoman Empire, dia napetraka ny fototry ny fananganana ny fanjakan'ny Isiraely. Ilaina ny ady lehibe faharoa mba hahatratrarana io, miaraka amin'ny kompleks fandoavan-trosa feno fatiantoka ho toy ny fahazoan-dàlana hananganana ny fanjakan'ny Isiraely ao amin'ny 1948. Miaraka amin'ny famoretana ny Fanjakana Britanika taty aoriana sy ny fanjan'ireo zanatany tranainy rehetra dia afaka nitranga ny fifandimbiasan'ny tafika ho any Etazonia ary nentina an-tsokosoko teo ambany fianakavian'ny mpanjaka britanika ireo zanatany tranainy rehetra, niaraka tamin'i Etazonia ho fanjakana vazaha ny satro-boninahitra Britanika. Ity fanjakana Amerikanina vaovao lehibe ity (izay mandoa hetra amin'ny satroboninahitra anglisy) dia efa hirodana izao. Ny faminaniako dia efa an-taonany maro no hahasitrana ny fanjakana Ottoman. Izany dia misy ifandraisany amin'ny script script, izay tsy maintsy misy ny ady eo amin'i Jerosalema eo anelanelan'ireo antokom-pivavahana lehibe roa. Noho io antony io, tsy maintsy nidina teo am-pelatanan'ireo Zionista i Jerosalema ary noho izany ny ady lehibe voalohany sy faharoa dia nandeha araka ny soratra. Ny ady lehibe faharoa dia ny lahasa manaraka amin'ny fandaharam-potoana.
Mba hahatratrarana io lohahevitra fahatelo io, dia ho voaorina voalohany ny korontana.
'Ordo ab Chao' dia amin'ny teny latinina ho an'ny 'filaminana noho ny korontana', fotoana lehibe iray izay nampiharina hatramin'ny fotoana tsy voafetra ka nahafahana namolavola hery indray. Izy dia avy amin'ny Freemasonry, izay mizara ho gradations. Ny laharana ambony indrindra ao anatin'ity fiaraha-monina miafina ity dia 33. Hitantsika be dia be ny zava-dehibe na ny zava-nitranga izay misy rantsan-tànana ao aminy izy ireo. Ny andraikitry ny fiaraha-monina miafina dia matetika tsy voailikilika na esorina amin'ny maha-tsikombakomba, fa raha mijery fotsiny ireo tranon'ny mpanjaka isika dia hitantsika fa manan-danja tokoa ny lanjan'ny 'baikon' ireo. Ny Orange, ohatra, dia malaza amin'ny Malagasy knightthood (fiarahamonina, ampahany amin'ny hazon'ny fianakavian'ny fikambanana miafina).
Ny fiarahamonina miafina dia pharaonic miafina na Babylonianina avokoa. Ka izany no hiverenan'ny governemanta miorina amin'ny piramida lehibe voalohany avy amin'ny "sivilizasiona" fantatra voalohany. Toa mafy tokoa fa ao anatin'ireny fiaraha-monina miafina ireny dia misy (sampana mifandraika) fantsona razana amin'ny alàlan'ny fanambadiana ara-pirazanana amin'ny alàlan'ny fanambadiana efa nalamina.
"Ordo ab Chao" no teny filamatry ny Scottish Rite Freemasonry. Ny teny anglisy hoe 'Scottish' dia avy amin'ny teny grika 'skotiā' (ny fivoaran'ny vehivavy skotios, maizina, alokaloka, avy amin'ny alokaloka izay avy aminy, avy amin'ny skotos, maizina). Azonao atao ny milaza fa raha ny 'skotos' dia ny maizina sy ny alokaloka, ny 'skotiā' dia maneho ny jiro. Raha ho hitantsika taty aoriana fa Luciferian Freemasonry, dia io angamba no fahazavana Luciferian. Rehefa dinihina tokoa, dia niteny Andriamanitra hoe 'misy ny mazava' ary dia nihodina ny efijery ary niseho ny sary. Mampahatsiahy izany ny lalao Playstation izay novahana, ka hita eo amin'ny efijery ilay sary amin'ny endrika jiro mazava (jereo ny teoria simulation).
Nisy tempolin'i Venus Scotia nijoro tany Ejipta fahiny. Voalaza fa ny firenena tany Skotlandia dia naka ny anarany avy amin'ny mpanjakavavy pharaoh iray antsoina hoe Scota. Indray izahay dia mahita rohy iray hafa miaraka amin'ireo iray amin'ireo sivilizasiona tranainy indrindra, dia i Ejipta. Ny fifanakalozan-kevitra hoe inona no fanjakana taloha, Babylona na Egypt, dia toa tsy ho resy tanteraka raha mandavaka lalina ianao, fa ny farany dia ny hoe ny fiarahamonina tsiambaratelo dia toa mifandray amin'ny fireneny tamin'izany fotoana izany. Na izany na tsy izany dia hita mazava fa toa misy ny fanambadiana efa nomanina ao anatin'ity vondrona ra-marika ity. Ny olana, na izany aza, ny zava-drehetra dia voagejan'ny latabatra toy ny vaovao sandoka na ny tsikombakomba momba ny tsikombakomba, hany ka mbola vitsy no mbola mijerijery azy. Tsy hanao olana eto ihany koa aho. Googlet ny tenanao hahafantatra hoe nanambady nandritra ny taonjato maro ilay elita fa tsy noho ny fahatsapana fihetseham-po, fa noho ny tena zava-misy.
Ny freemasons dia tsy ho voatondro andraikitra lehibe eo amin'ny tantaran'ny ofisialy. Izy ireo dia miasa toy ny teo amin'ny sehatra taloha ary hilalao hatrany ny lanjany manokana (eo amin'ny sehatry ny hita maso). Azonao atao ny mampitaha izany amin'ny fotoana ankehitriny, izay ahitana ny tranon'ny mpanjaka nasehon'ny haino aman-jery ho toy ny andrim-panjakana ara-pomba izay tena noteren'ny fitondrana demokratika (izay mazava ho azy dia fanao masiaka). Ka raha mikaroka Wikipedia ianao amin'ny famakiana ofisialy ireo tompona voalaza etsy ambony, dia tsy manana anjara toerana lehibe izany. Ao anatin'ireo sary an'ohatra rehetra izay hitantsika manodidina antsika anefa, dia feno hatrany ny tandindona freemasonry (Max Verstappen, tsia. 33, ohatra, sy ny chessboard eo amin'ny saina Formula 1). Ny Freemasons dia mampiseho hoe manjaka izy ireo, fa jamba kosa ny maro.
Matetika dia voalaza fa mampihoron-koditra ity taratasy ity, satria ny teny hoe "Nazisme" dia tsy ho fantarina tao amin'ny 1871 mihitsy. Ny tsy voamarina amin'izany fanjohian-kevitra izany dia ny mpamorona script dia afaka mamantatra ireo teny alohan'ny hahafantaran'ny besinimaro izany teny izany. Ka raha mametraka anarana marika amin'ny tsena ianao amin'ny maha orinasa anao, dia ny masoivoho ara-barotra no hamoaka izany haingana kokoa noho ny fahitan'ny besinimaro izany. Eny, raha namariparitra ny script (ara-paminaniana) i Mazzini namany i Pike, dia mety misy ny fehezan-teny ao anatiny izay tsy fantatry ny besinimaro tamin'ny taona maro taty aoriana.
Ny ady lehibe fahatelo dia noho izany, araka ny taratasin'i Pike, dia hipoitra amin'ny fifandirana eo amin'ny Zionista politika sy ireo mpitarika ny tontolo islamika. Raha mijery ny faminaniana ara-pivavahana isika, dia mahita i Jerosalema no tena mitana andraikitra lehibe. Ny fananganana ny tempolin'i Solomona efa nomanina dia hanana anjara toerana lehibe ao amin'izany araka ny faminaniana amin'ny andro farany avy amin'ireo fivavahana voalaza. Ny fanamboarana io tempoly io dia voalaza ao amin'ireo faminaniana ireo ho mariky ny fahatongavan'ny anti-Kristy, izay ho mariky ny hoe hisy tokoa ny ady lehibe iray lehibe rehetra. Mahagaga fa ny sekreteram-panjakana amerikana Mike Pompeo dia nitsidika catacomb teo ambanin'ny moske izay efa vita eo amin'ny sisan'ity tempoly ity (Zionista politika?) Tsy ela akory izay. Eto dia nijery modely tamin'ity tempoly ity izy (jereo eto). Na ny taratasy avy amin'i Albert Pike, sy ny faminaniana farany amin'ny endriny, ary koa ireo famantarana izay manambara fa ny zavatra hitranga ao amin'ireo soratra masina ireo, dia manondro fa manatri-maso ny soratra masina lehibe isika. Soratra iray izay fantatry ny mpitarika ny fikambanana miafina toy ny grady 33e mason.
Noho izany dia afaka nilaza isika fa ny ra farao no mahalala ny soratra ary manala ny fampandrosoana ara-tsosialy mifanaraka amin'izany script izany aza. Ny lehibe indrindra izay mihazona azy dia ny 'Ordo ab Chao'. Izany no antony ahafahantsika milaza amin-katoky fa mamorona korontana hatrany izy ireo vao mahazo hery bebe kokoa. Izany no ahafahako milaza fa ny Brexit dia manaraka an'io script io ary io no harbinger hery bebe kokoa amin'ny tontolon'ny hery Islamika avy amin'ny taratasy etsy ambony avy amin'ny Pike. in ity lahatsoratra ity Efa nohazavaiko ny fomba namantarako azy nandritra ny taona maro fa ny Fanjakana Ottoman dia ho sitrana ary ny fomba hampiasana ny Brexit hitarika korontana any Eropa. Koa i Boris Johnson dia angamba tsy latsaky ny ra amin'ny ra mandriaka iray toy izany. Maka ny toeran'ny olon-drehetra hitantsika amin'ny politika sy ny haino aman-jery ny fiandohan'izany ary noho izany dia handray anjara mavitrika amin'ny fanatanterahana ny «script of Master» hatrany izy ireo.
Lisitry ny rohy loharano: wikipedia.org
Ny fitsaràna farany amin'ny Fanjakana tandrefana Roma miaraka amin'ny fanonganam-panjakana ao Venezoela
Sheikh Imran Hosein maminany ny ady ho an'i Constantinople (Istanbul)
Tags: razambeny, taranaka, Boris, Brexit, Featured, Johnson, Ottoman, Ottoman, manan-karena, Tiorka, Tiorka, Sionista
JtheRed nanoratra hoe:
4 Septambra 2019 ao amin'ny 14: 03
Misaotra anao tamin'ny asa rehetra.
Tsy azoko antoka raha efa nahare an'i Sheikh Imran Hosein ianao. Nandritra ny taona maro izy no nilaza ny maha-zava-dehibe an'i Constantinople amin'ny fotoanan'ny farany ary amin'ny fomba ahoana no hampifanarahana ny Ortodoksa sy ny tontolo silamo, ary rehefa tafaverina i Constantinople dia fotoana iray i Al-Masih ad-Dajjal (“ny mesia sandoka, mpandainga sandoka) , hiverina ilay mpamitaka ”) amin'ny fampianarana Silamo. Ity misy video iray na miresaka momba azy.
4 Septambra 2019 ao amin'ny 14: 05
Raha mikaroka amin'ny Sheik Imran Hosein ianao amin'ny lahatsoratra etsy ambony dia ho hitanao fa izaho no hiresaka azy amin'ity lahatsoratra ity.
4 Septambra 2019 ao amin'ny 15: 13
Miombon-kevitra tanteraka amin'ity famakafakana tsara ity! Nandritra izany fotoana izany, ity trano karatra ara-politika sy ara-toekarena ity dia efa niasa nandritra ny am-polony taona izay nampiditra azy tamin'ny fotoana voatondro. Hitanay izao ireo famantarana rehetra mitranga, ohatra ny fametrahana ilay jiolahy voaheloka ho lohan'ny ECB. Vakiantsika ao amin'ny haino aman-jery izao fa tsy niasa ny politikam-pividianana mividy ny ECB ary nahatonga azy ho mora tohina Euro fotsiny. Io indrindra ilay fikasana ny fandaharam-potoanan'ny covert, hilentika ny zava-drehetra miaraka ...
Mandreraka tsara nanoratra hoe:
4 Septambra 2019 ao amin'ny 15: 17
Kristiana nateraka indray aho ary tiako ny hampianarinao ahy amin'ireto zavatra rehetra ireto.Ny Symbolisme dia saika nahatonga ahy schizo niaraka tamin'ny isan'ireo olona nolazaiko sy fantatro tamin'ny fijerena indray izay mavitrika ao Freemasonry, koa ny toetrany sy ny toetrany. Ny fika dia azo fofonaina amin'ny tsipika avy any amin'ny 3 metatra ary hivavaka isan'andro ho an'ny fanahin'izy ireo mba "hieritreritra ny tenany manokana" alohan'ny hanaiky ny tombo-mason'ny Biby!
Ny zavatra 1 dia tsy mahatsara ahy akory, Raha manambara foana ianao fa diso ny rafitra Luciferian, dia maninona ianao no mandika izany tsy misy dikany? ny "script" dia lasa tsy nisy afa-tsy ny "fandaharam-potoana" alohan'i Satana (izay tsy nianjera ho an'ny tenany sy havana tsy nahomby fa nantsoina fotsiny hoe Lucifera) hamonoana an'Andriamanitra sy ny zavatra noforoniny, ary raha toa ka efa nanonona olona toa an'i Pike ianao miakatra ny fiakarana, midika izany fa "mifototra" ny zavatra hitranga izy, araka ny fandehan-javatra eto an-tany, ary avelan'i satana izay hitondra fanjakana eto ambonin'ny tany
Manoro hevitra anao koa aho hamaky ny vanimpotoana Mesopotamia amin'ny "alohan'ny safo-drano", Raha mijery ny disinfo (efa an-tapitrisany taona isika, ny volana dia vatolampy iray nialonanay azy lol) dia fantatro tsara fa handeha amin'ny haavo vaovao ianao, mahita be dia be ny Fanahy Masina ao aminao Martin, Ary manantena aho fa ny hevitro dia hahatonga anao hitovy fijery kely amin'ny fomba 21e taonjato (nankahalaina, maniratsira sy fandrahonana) Kristiana mijery izany, I am tsy katolika, fanavaozana sns, ara-bakiteny "Reborn"
4 Septambra 2019 ao amin'ny 16: 05
Miorina amin'ny faharesen-dahatra kristianina anananao, azoko ny valin-teninao, fa mangataka aminao aho (sy izay rehetra mamaky ity) hamaky ity lahatsoratra ity am-pitandremana, mba hahatakaranao tsara ny fomba hametrahana ireo teny hoe 'Satana' sy 'Lucifer':
4 Septambra 2019 ao amin'ny 16: 08
Alohan'ny hamalianao bebe kokoa dia tiako ny mangataka aminao amim-pitandremana sy hamaky tsara ireo lahatsoratra rehetra eo ambanin'ny rantsankazo manga. Raha tsy izany dia hanohy hiatrika ny fisafotofotofan'ny fiteny Babelita isika.
4 Septambra 2019 ao amin'ny 19: 52
Ka hey !!! Amin'ny PC, Mobile 2x no nanapaka izay te hanoratra!
Fa raha tsy izany dia nanoratra boky tsara aho fa tsy te-hanomboka amin'ny fanajana rehetra. Amin'ny fomba tsara ary tsy misy resaka miteny ratsy na mankahala, nataoko ihany koa (angamba "nahavita zavatra, Demotivation?"
Azoko hoe avy aiza ianao satria ianao koa mahalala ny fomba amam-panao esoterika azy, Nefa fantaro ny fahavalonao, ary aza manahaka azy ireo, ny zavatra rehetra "ankahalan'izy ireo", halavany, manome fiovana hafa noho ny tian'Andriamanitra, ny mifamadika dia matetika ny fahamarinana , Ny marobe marobe momba ny "Demiurge" tato ho ato izay dia natao ho an'Andriamanitra tokoa, ny fitsangantsanganana toy ny Marvel's Endgame sns (Endgame koa ny lohahevitra lehibe ankehitriny amin'ny zava-drehetra)
Miala tsiny fa betsaka ny tsy ampy amin'izao fotoana izao, nahita ny asanao aho tamin'ity taona ity raha nahare olona anglisy iray niresaka aho fa "ny Dome of the rock" dia nandoro tamin'ny fotoana mitovy amin'i Notre Dame (ary izao dia mety hitady izany isika. "hetsika" ho avy atsy ho atsy ary tsy misy tranonkala arabo ary tonga amin'ny alàlan'ny "Google" na toerana rehetra ianao! Herim-po hamerina hamerenany fa IANAO no naka sary ilay ramatoa ao amin'ny "Care care of youth" izay inoako fa tanterahina ny fanaon'ny MKULTRA amin'ny alàlan'ny fampijaliana ara-tsaina, izy ireo koa dia manana fango an'ohatra maro be sy ao amin'ny tranobeny, ankehitriny misy tranga maro dia Katolika taloha ary atolotry ny olona "fiangonana"
(Efa fantatro nandritra ny taona maro ianao !!!! 111)
4 Septambra 2019 ao amin'ny 16: 43
Ho an'ireo izay mahita maso, mazava tsara toy ny fitaratra ny toe-java-misy geopolitika.
Miomana amin'ny Dolara Amerikana ve ny Fed?
Fanamarihana sy fihetsika tsy mahazatra ataon'ilay lohan'ny Bank of England sy ny tompon'antoka ara-bola foibe hafa manamafy fa misy tantara ratsy ao amin'ny asa hamaranana ny andraikitry ny dolara amerikana ho sandam-bola famatsiam-bola eran-tany. Ao anatin'io fomba io dia tafiditra amin'ny Fed izany fikosoham-boto izany ka nahatonga fahakiviana ara-toekarena. Raha miorina ao anatin'ny volana ho avy io fisehoan-javatra io dia hidina ao amin'ny boky tantara i Donald Trump amin'ny alàlan'ny tantara, ary ny toekarena izao tontolo izao dia harisika amin'ny fidradradradra indrindra hatramin'ny 1930. Ireto misy singa mila dinihina.
Kabary Bank of England
Ny lehiben'ny Banky anglisy manokana, Mark Carney, dia nanao kabary nahagaga tamin'ny fivoriana fanao isan-taona farany teo amin'ireo banky foibe sy olom-boafidy farany tao Jackson Hole Wyoming tamin'ny Aogositra 23. Ny adiresy pejy 23 amin'ireo mpiasan'ny banky foibe sy mpamatsy vola ara-bola hafa dia mazava tsara ho famantarana lehibe iray izay nanoloran'ny Powers That Be izay mitantana ny banky foibe manerantany.
Mandritra izany fotoana izany, mazava ho azy, varavarana zavona matevina natsangana tamin'ny endrika Brexit, ilay ady atao hoe varotra ary ny tsy fitovian'ny ady eo amin'ny Isiraely sy Iran.
Ireo izay tompon'andraikitra amin'izany dia maneho ny hery eo amin'ny sehatry ny hita maso ary, amin'ny maha-tsara tongotra, jereo ny fanendrena teo aloha teo am-panaovana ny asa tsy hita maso. Ohatra ny tsy fahampiana BIS roa ...
9 Septambra 2019 ao amin'ny 15: 33
salmon tsara ka tsy tokony hahagaga raha nandao ny sambo tombony ratsy i draghi hatramin'ny Oktobra 31 (Brexit)
"Mario Draghi dia nandao ny 31 tamin'ny Oktobra ho CEO ny ECB."
13 Septambra 2019 ao amin'ny 12: 23
« Ny ady lehibe Brexit dia drafitra efa voarindra mialoha
Ny NOS sy RTL dia mandinika tsara ny ala lalina mba hamonosana ny vokariny lalina »